ကျဆုံး သွားတဲ့ သူရဲကောင်းတွေ အတွက် ပြုလုပ်သော Flower Strikeလှုပ်ရှားမှုတွင် ပါဝင်ခဲ့တဲ့ သန္တာလှိုင်….. – Cele Snap
ပရိတ်သတ်ကြီးရေ…..မော်ဒယ် သန္တာလှိုင်ကတော့ လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေမှာ ပြည်သူတွေနဲ့အတူ တက်ကြွစွာ ပူးပေါင်းပါဝင်နေသူ တစ်ဦးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ခက်ခဲနေတဲ့ ပြည်သူတွေအတွက် လိုအပ်တဲ့ စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းများကိုလည်း သွားရောက်လှူဒါန်းပေးခဲ့ပါသေးတယ်။ ပြည်သူတွေနဲ့အတူ လမ်းပေါ်ထွက်ကာ ဆန္ဒထုတ်ဖော်နေရုံတင်မကဘဲလူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာကနေလည်း Speak Out လုပ်ပေးနေတာပါ။
ဒီနေ့ကတော့ လူထုလှုပ်ရှားမှုမှာ ပါဝင်ရင်း ကျဆုံးသွားတဲ့ သူရဲကောင်းတွေအတွက် ဂုဏ်ပြုပေးတဲ့ Flower Strike နေ့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလှုပ်ရှားမှုတွင် အမှန်တရားဘက်ကနေ ရပ်တည်နေကြတဲ့ ပြည်သူတွေနဲ့ အနုပညာရှင်များလည်း ပါဝင်တာကို မြင်တွေ့ကြရမှာပါ။ မကြာသေးခင် နာရီပိုင်းလောက်ကလည်း သန္တာလှိုင်ရဲ့ လူမှု ကွန်ယက် စာမျက်နှာတွင် ကျဆုံးသွားတဲ့ သူရဲကောင်းတွေအတွက် ပြုလုပ်သော Flower Strike လှုပ်ရှားမှုမှာ ပြည်သူတစ်ဦးအနေနဲ့ ပါဝင်ဆုတောင်းခဲ့တဲ့ ပုံရိပ်တွေကို ဝေမျှထားတာပါ။ သူမကလည်း ” ဪ…. ပန်းတွေနဲ့ ရိုက်ရမယ့် Flower Strike နေ့မှာတောင် ရိုက်စရာ ပန်းတွေက အိမ်မှာကျန်ခဲ့ပြီရှိတဲ့ ပန်းလေးနဲ့ပေါ့ကွယ်။ အရေးတော်ပုံကြီး အောင်ပြီးရင် ပြန်စရာအိမ်မရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကို ကိုယ်ချင်းစာပါတယ်။ ကျွန်မမှာ ပြန်စရာအိမ်မရှိတော့ဘူးဆိုရင်တောင်မှ ယောက်ျား နဲ့ ကလေးတွေ အသက်ရှင်လျက်ရှိပါသေးတယ်။
သားသမီးတွေဆုံးရှုံးသွားတဲ့ မိဘတွေရယ် အိမ်ထောင်ဦးစီးမရှိတော့တဲ့ အမေတွေ အမျိုးသမီးတွေရယ် ကိုစဉ်းစားလိုက်ရင် အော် အထုပ်ဆွဲပြီးလျောက်ပြေးနေရတဲ့ ကိုယ့်ဒုက္ခက ဘာမှမပြောစလောက်လေးပါလား ရယ်လို့အားပြန်တင်းပြီး လုပ်စရာရှိတာတွေဆက်လုပ်ဖို့ အားပြန်မွေးရတယ်။ အားတင်းထားကြပါ။ စည်းလုံးတာတွေ စည်းကမ်းရှိပြီး တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ကူညီဖေးမနေတာတွေကအောင်မြင်ဖို့ အဓိကကျတဲ့ အချက်တွေပါ။ အားမငယ်ပါနဲ့ အခုချိန်မှာ ဘယ်လိုကြည့်ကြည့် အားရစရာမရှိဘူးလို့ခံစားနေရပေမယ့် တစ်ချိန် ဓမ္မက အဓမ္မကို အုပ်စိုးသွားမှာပါ။ အရေးတော်ပုံ အောင်ရမည်။#SaveMyammar #FlowerStrikeMyanmar #FlowerStrik ” ဆိုပြီး ရေးသားထားတာပဲ ဖြစ်ပြီး ပရိသတ်တွေအတွက် ဒီသတင်းကို တစ်ဆင့်ပြန်လည် ကူးယူတင်ဆက်ပေးလိုက် ရပါတယ်နော်။
ပရိတျသတျကွီးရေ…..မျောဒယျ သန်တာလှိုငျကတော့ လူထုလှုပျရှားမှုတှမှော ပွညျသူတှနေဲ့အတူ တကျကွှစှာ ပူးပေါငျးပါဝငျနသေူ တဈဦးပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ ခကျခဲနတေဲ့ ပွညျသူတှအေတှကျ လိုအပျတဲ့ စားသောကျကုနျပစ်စညျးမြားကိုလညျး သှားရောကျလှူဒါနျးပေးခဲ့ပါသေးတယျ။ ပွညျသူတှနေဲ့အတူ လမျးပျေါထှကျကာ ဆန်ဒထုတျဖျောနရေုံတငျမကဘဲလူမှုကှနျယကျစာမကျြနှာကနလေညျး Speak Out လုပျပေးနတောပါ။
ဒီနကေ့တော့ လူထုလှုပျရှားမှုမှာ ပါဝငျရငျး ကဆြုံးသှားတဲ့ သူရဲကောငျးတှအေတှကျ ဂုဏျပွုပေးတဲ့ Flower Strike နပေဲ့ ဖွဈပါတယျ။ ဒီလှုပျရှားမှုတှငျ အမှနျတရားဘကျကနေ ရပျတညျနကွေတဲ့ ပွညျသူတှနေဲ့ အနုပညာရှငျမြားလညျး ပါဝငျတာကို မွငျတှကွေ့ရမှာပါ။ မကွာသေးခငျ နာရီပိုငျးလောကျကလညျး သန်တာလှိုငျရဲ့ လူမှု ကှနျယကျ စာမကျြနှာတှငျ ကဆြုံးသှားတဲ့ သူရဲကောငျးတှအေတှကျ ပွုလုပျသော Flower Strike လှုပျရှားမှုမှာ ပွညျသူတဈဦးအနနေဲ့ ပါဝငျဆုတောငျးခဲ့တဲ့ ပုံရိပျတှကေို ဝမြှေထားတာပါ။ သူမကလညျး ” ဪ…. ပနျးတှနေဲ့ ရိုကျရမယျ့ Flower Strike နမှေ့ာတောငျ ရိုကျစရာ ပနျးတှကေ အိမျမှာကနျြခဲ့ပွီရှိတဲ့ ပနျးလေးနဲ့ပေါ့ကှယျ။ အရေးတျောပုံကွီး အောငျပွီးရငျ ပွနျစရာအိမျမရှိတဲ့လူတှအေားလုံးကို ကိုယျခငျြးစာပါတယျ။ ကြှနျမမှာ ပွနျစရာအိမျမရှိတော့ဘူးဆိုရငျတောငျမှ ယောကျြား နဲ့ ကလေးတှေ အသကျရှငျလကျြရှိပါသေးတယျ။
သားသမီးတှဆေုံးရှုံးသှားတဲ့ မိဘတှရေယျ အိမျထောငျဦးစီးမရှိတော့တဲ့ အမတှေေ အမြိုးသမီးတှရေယျ ကိုစဉျးစားလိုကျရငျ အျော အထုပျဆှဲပွီးလြောကျပွေးနရေတဲ့ ကိုယျ့ဒုက်ခက ဘာမှမပွောစလောကျလေးပါလား ရယျလို့အားပွနျတငျးပွီး လုပျစရာရှိတာတှဆေကျလုပျဖို့ အားပွနျမှေးရတယျ။ အားတငျးထားကွပါ။ စညျးလုံးတာတှေ စညျးကမျးရှိပွီး တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ ကူညီဖေးမနတောတှကေအောငျမွငျဖို့ အဓိကကတြဲ့ အခကျြတှပေါ။ အားမငယျပါနဲ့ အခုခြိနျမှာ ဘယျလိုကွညျ့ကွညျ့ အားရစရာမရှိဘူးလို့ခံစားနရေပမေယျ့ တဈခြိနျ ဓမ်မက အဓမ်မကို အုပျစိုးသှားမှာပါ။ အရေးတျောပုံ အောငျရမညျ။#SaveMyammar #FlowerStrikeMyanmar #FlowerStrik ” ဆိုပွီး ရေးသားထားတာပဲ ဖွဈပွီး ပရိသတျတှအေတှကျ ဒီသတငျးကို တဈဆငျ့ပွနျလညျ ကူးယူတငျဆကျပေးလိုကျ ရပါတယျနျော။